[MMAnime] Angels of Death : Angels of Death
Japanese: 殺戮の天使 Type: TV Episodes: 16 Status: Finished Airing Aired: Jul 6, 2018 to Oct 26, 2018 Premiered: Summer 2018 Broadcast: Fridays at 20:30 (JST) Producers: Lantis, AT-X, KBS, Kadokawa Licensors: Funimation Studios: J.C.Staff Source: Game Genres: Adventure, Horror, Psychological, Thriller Duration: 23 min. per ep. Rating: R - 17+ (violence & profanity) Rachal Gardner ဆိုတဲ့ကောင်မလေးက အဆောက်အဦးတစ်ခုရဲ့ မြေအောက်ခန်းတစ်ခုမှာနိုးလာပါတယ်။ အဲ့လိုနဲ့သူဘယ်နေဘယ်လိုဒီကို ရောက်နေလဲ ဆိုတာကို သိရဖို့လျှောက်သွားရင်း နောက်တစ်ထပ်ကို ရောက်သွားပြီး Zack လိုခေါ်တဲ့ ပတ်တီးအပြည့်စီးထားတဲ့လူတစ်ယောက်က သူ့ကို လိုက်သတ်လို့နောက်တစ်ထပ်ကို ထွက်ပြေးရပြန် ပါတယ် ။ ထိုအထပ်မှာ ရှိနေတဲ့နောက် တစ်လူတစ်ယောက်ဆီကနေ သူမိဘတွေ သေဆုံးသွားပြီဆိုတာသိလိုက်ရတော့ သူမ အသက်ရှင်ချင်စိတ်တွေပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ အဲ့လိုနဲ့ Zack က သူကို ပြန်ရှာတွေ့သွားတော့ သူကိုသတ်မလို့လုပ်ပြန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Rachal ကတော့ အသက်ရှင်ချင်စိတ်တွေကုန်ခန်းသွားပြီဖြစ်လို့ ဘာမှမတုန့်ပြန်မရုန်းကန်တော့ပါဘူး။ Zack ကတော့ သူသတ်ချင်တာမင်းလို အရုပ်လိုမျိုးသူကို မဟုတ်ဘူးဆိုပြီ မသတ်ဘဲ ထားထွက်သွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသက်ရှင်ချင်စိတ်ပျောက်ရုံသာ မက သေချင်စိတ်ပါပေါက် နေပြီဖြစ်တဲ့ Rachal ကတော့ သူ့မကို သတ်ပေးဖို့ နောက်ကလိုက်ပြီးတောင်းဆိုပါတယ်။ Zack ကလဲ ဒီအဆောက်အအုံကြီးကနေ ထွက်် ဖို့ ကူညီပေး ။ အပြင် ထွက်လို့ရရင် မင်းကို သတ်ပေးမယ်လို ကတိပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲ့တော့ သူတို့နှစ်ယောက် အပြင်ကိုထွက်နိုင်ပါ့မလား အပြင်ထွက်ဖို့ ဘာတွေကိုကျော်ဖြတ်ရမလဲ အပြင်ရောက်ရင်ရော ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မှာလဲ ဆိုတာကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက် ပါ ....